USony usungula le ntengiso inomdla wokukhumbula uLwesihlanu oMnyama | Iindaba zeGajethi
USony usungula le ntengiso inomdla wokukhumbula uLwesihlanu oMnyama kwiVenkile yePlayStation
NgoLwesihlanu omnyama (uLwesihlanu oMnyama wepistist) ulungile kwikona. Okwangoku, kwihlabathi lamagama evidiyo, iMicrosoft ihambile, ifuna ukwenza imali ngayo nayiphi na indlela kwaye Imicimbi yakho emnyama yangoLwesihlanu kwiVenkile yeXbox Baye bafumaneka kangangeentsuku, ngaloo ndlela abasebenzisi beGold Live banokubamba izihloko. Nangona kunjalo, u-Sony ukhethe ukugcina imfihlo kude kube ngumhla wokugqibela, abasebenzisi be-PlayStation Plus sele befumana ii-imeyile kunye nokubala ukuya kuLwesihlanu oMnyama kwaye Baye bazisa le vidiyo ikhethekileyo kwiYouTube esikushiya yona ingezantsi.
Kwintengiso sinokubona ubuso babasebenzisi xa bebona i-Black Friday ibonelela kwiVenkile ye-PlayStation, ubuncinci yile nto bafuna ukuba siyicinge, ukuyiphelisa ngokukhumbula ukuba kuya kubakho ukuya kuma-60% kwizihloko ezininzi, kwaye inyani kukuba sikhangele phambili kuyo. Kukho amarhe okuba singasifumana isaphulelo kwizihloko zokukhutshwa zamva nje ezinje nge-EA 17 yeFIFA, kunye nenye evela kwi-EA ene-DICE, i ithafa lemfazwe 1, ekulindeleke ukuba yehle ijikeleze i-50 euros (nge-69,99 euros ibiza okwangoku). Okwangoku, silinde ezinye izibonelelo zodidi zolu hlobo ezinje Witcher 3 o Igazi.
Ngokupheleleyo, kuya kufuneka silinde kwaye sibone ukuba isinika ntoni. Nangona kunjalo, uSony akabhengezanga naluphi na uhlobo lokwazisa ngokubhekisele kwizixhobo zekhompyutha, sibhekisa kwizixhobo kunye nolawulo, kodwa ngokuqinisekileyo izibonelelo ezikwi-El Corte Inglés, Media Markt okanye eAmazon ziyasivumela ukuba sifumane ulawulo okanye naluphi na uhlobo lokufikelela ikhonsoli. Okwangoku, ukubala kuyaqala, masidlale kakhulu xa uLwesihlanu omnyama usenzeka kwiVenkile yePlayStation. Izithembiso zokulindela zikwalindelwe kubhaliso lwePlayStation Plus.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » USony usungula le ntengiso inomdla wokukhumbula uLwesihlanu oMnyama kwiVenkile yePlayStation
Ngamanye amaxesha i-block blocker iyasilela nge-plugin yevidiyo kwaye ayinakudlalwa. Ndiyakucela ukuba uyicime okanye uyihlaziye iphepha ukuba awunayo.
Hlaziya iphepha ukuze ubone ngoku. Ukubulisa kunye nombulelo.
IMicrosoft kunye ne-HP ziya kuphinda zisungule i-terminal ngeFowuni yeWindows